शिर्क (बहुदेववाद) – Islam Guide
डिसेम्बर 1, 2017 Comments
तौहीद (एकेश्वरवाद) को विपरित शिर्क (बहुदेववाद) हो। जसरी अल्लाहमाथिको आस्था र मात्र उहाँको उपासना सर्वोत्कृष्ट पुण्य हो त्यसरी नै शिर्क सबैभन्दा घृणित र महापाप हो। तौबा (प्रायश्चित) नगरुन्जेल यो क्षमा योग्य छैन। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “अल्लाहले शिर्कलाई कदापि क्षमा गर्नु हुन्न तर यसबाहेकका अन्य पापलाई क्षमादान दिन सक्नु हुन्छ।” (श्रोत- सूरह अन्-निसा : ४/४८) जुन बेला रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सित सोधियो… अल्लाहको दृष्टिमा महापाप के हो ? उहाँले जवाफ दिनु भयो… “अल्लाहले तिमीलाई सृष्टि गर्नु भएको छ, तै पनि तिमी उहाँको लागि प्रतिद्वन्दी ठहर गर्छौ।” (श्रोत- बुखारी : ४२०७, मुस्लिम : ८६)
शिर्कले सम्पूर्ण उपासनाहरुलाई व्यर्थ र निराधार बनाई दिन्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यदि सन्देष्टाहरुले शिर्क गरेका भए यिनीहरुका सबै सत्कर्महरु खेर जाने थिए।” (श्रोत- सूरह अल्-अन्आम : ६/८८) बहुदेववादहरुका बास सदाको लागि नरक नै हुनेछ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “जो कोही अल्लाहको साथमा कसैलाई साझेदार बनाउँछ, अल्लाहले उसको लागि स्वर्ग निषेध गर्नु भएको छ र उसको बासस्थान नरक हुनेछ।” (श्रोत- सूरह अल्-माइदा : ५/७२)
शिर्क दुई प्रकारका छन्-
१) ठूलो शिर्क- अल्लाह बाहेक अरु कसैको पूजा उपासना गर्नुलाई ठूलो शिर्क भनिन्छ। तन, मन र वचनले अल्लाहको उपासना गरियो भने यही तौहीद र ईमान हो र अन्य कसैको लागि गरियो भने यही शिर्क (बहुदेववाद) र कुफ्र (अवज्ञा) हो।
ठूलो शिर्कको उदाहरण- अल्लाह बाहेक अरु कसैसँग रोग निको हुन वा रोजीमा सम्वृद्धि हुनको लागि दुआ गर्नु, अरुमाथि आश्रित हुनु वा ढोग गर्नु इत्यादि।
अल्लाहले भन्नु भएको छ… “तिम्रा पालनकर्ताले भन्नु भएको छ… मलाई नै पुकार, म तिमीहरुको पुकार सुन्दछु।” (श्रोत- सूरह अल्-मुमिन : ४०/६०)
अल्लाहले भन्नु भएको छ… “यदि तिमीहरु आस्थावान हौ भने अल्लाहमाथि नै भरोसा गर।” (श्रोत- सूरह अल्-माइदा : ५/२३)
अल्लाहले भन्नु भएको छ… “अल्लाहकै लागि सज्दा र उहाँकै भक्ति गर।” (श्रोत- सूरह अन्-नज्म : ५३/६२)
जसले अल्लाह बाहेक अरु कसैको उपासना गर्यो, उसले शिर्क र कुफ्र गर्यो।
२) सानो शिर्क- ठूलो शिर्कसम्म पुर्याउने प्रत्येक वचन वा क्रियाकलापलाई सानो शिर्क भनिन्छ।
सानो शिर्कको उदाहरण- देखावटिको लागि सलाह पढ्नु, आफूतिर आकर्षण गर्न मिठो स्वरमा कुरआनको पाठ गर्नु, प्रशंसा बटुल्नको निम्ति ठूलो स्वरमा अल्लाहको नाम लिनु इत्यादि। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “तिमीहरुका लागि जुन कुरादेखि म भयभित छु त्यो सानो शिर्क हो। उहाँका साथीहरुले सोधे, ए हजुर ! सानो शिर्क भनेको के हो ? उहाँले जवाफमा भन्नु भयो… रिया अर्थात देखावटिको लागि पुण्य गर्नु।” (श्रोत- अहमद : २३६३०)
मानिसले के भन्लान भन्ने डरले सलाह पढ्नु र त्यहाँ कोही छैन भने नपढ्नु भनेको मुनाफिक (कपटी) को पहिचान हो। यो ठूलो शिर्क हो र यसले मानिसलाई इस्लामदेखि नै बाहिर गरि दिन्छ।
के मानिससित माग्नु वा केही कुरा चाहनु शिर्क हो?
इस्लामले मानिसको बुद्धिलाई अनावश्यक कार्य, धोका र अल्लाह बाहेक अन्य मानिसको लागि ढोग गर्नु र लिप्त हुनबाट स्वतन्त्र गरेको छ।
त्यसैले मृत वा निर्मित वस्तुसँग माग्नु, वा उसको अगाडि ढोग गर्नु निराधार र महापाप हो।
तर जीवित उपस्थित व्यक्तिलाई उसले गर्न सक्ने सहयोग माग्नु जायज छ, जस्तै… डुब्नेलाई बचाउने सहयोग वा मेरो लागि अल्लाहसित प्रार्थना गर्नुहोस् भन्न सकिन्छ।
के मृत मानिस वा निर्मित वस्तुसित माग्नु शिर्क हो?
हो- => यो शिर्क र इस्लाम विपरित कुरा हो, ’cause मरेका मानिसहरु वा ठोस वस्तुहरु न त हाम्रो गुहारलाई सुन्न सक्छन् न त पूरा नै गर्न सक्छन्।प्रार्थना गर्नु एक प्रकारको उपासना हो, त्यसैले अल्लाह बाहेक अरु कसैलाई पुकार्नु शिर्क हो।अरबका बहुदेववादीहरु मरेका मानिस र निर्मित वस्तुहरुलाई पुकार्ने गर्दथे।
होइन- => होइन- यस्तो जीवित व्यक्ति जो तपाईको कुरा सुन्न र पूरा गर्न सक्षम छ, के उसलाई गुहार्न सकिन्छ?
हो- => हो- यो गुहार एकदम जायज छ, ’cause यो मानिसहरुको आपसी दैनिक क्रियाकलाप र सहयोग हो।
होइन- => होइन- जीवित व्यक्तिसित गर्न नसक्ने कुरा माग्नु, जस्तै कुनै बाँझ महिलाको पुकार… ए बाबा!मलाई राम्रो र गतिलो सन्तान देऊ भन्न वैध छैन, ’cause अल्लाह बाहेक अरु कसैलाई गर्न नसक्ने कुरा माग्नु शिर्क हो।